कठै यी जुम्ल्याहा ! के छुट्याउलान् त डाक्टरले ? | Daily News Pokhara कठै यी जुम्ल्याहा ! के छुट्याउलान् त डाक्टरले ? – Daily News Pokhara
Home Health कठै यी जुम्ल्याहा ! के छुट्याउलान् त डाक्टरले ?
कठै यी जुम्ल्याहा ! के छुट्याउलान् त डाक्टरले ?
Jul 09, 2017, 00:58 am0
दैवले पनि कसैकसैलाई साह्रै अन्याय गर्दोरहेछ । यी दुई वर्षका जुम्ल्याहा बच्चालाई हेर्दा यही महसुस हुन्छ ।
पूर्वी भारतको ओरिसास्थित कन्धामल गाउँको एउटा विपन्न परिवारमा जन्मेका जुम्ल्याहा बालक हनि र सिंहको टाउको जोडिएको छ, त्यो पनि एकदम अप्ठेरो कोणमा । डाक्टरहरुले जटिल शल्यक्रियाबाट उनीहरुको टाउको छुट्याउन सकिने सम्भावना व्यक्त गरेका छन् ।
तर, दैनिक गुजारा गर्नलाई नै धाै-धाै पर्ने परिवारले उपचार खर्च धान्न सक्ने कुरै भएन ।
२५ वर्षीया पुष्पाञ्जली कन्हारले स्थानीय एक अस्पतालमा ९ मार्च, २०१५ मा यी बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन् । पहिलोचोटि आफ्ना जुम्ल्याहा छोरालाई देख्दा उनी निकै आत्तिएकी थिइन् ।
तत्कालै उनीहरुको टाउकोको स्क्यान गर्दा दुवैसँग अलग-अलग ब्रेन रहेको र टाउकोको माथिल्लो भाग मात्रै जोडिएको पाइयो । आफ्ना छोराहरुलाई छुट्याउने शल्यक्रिया गर्न सम्भव रहेको थाहा पाएपछि यी बाबुआमामा कसैले सहयोग गरिदेला कि भन्ने आशामा बसिरहे ।
अहिले आएर ओरिसाको राज्य सरकारले सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको छ । परिवारले चाँडै नै नयाँ दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्िटच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेज हस्पिटलका डाक्टरलाई भेट्दैछन् ।
कन्धामलका मेडिकल अफिसर डा. स्वप्नेश्वर गडनायकले भने, ‘यस्ता खालका केही केसहरुमा शल्यक्रिया गरेर टाउको छुट्याउन सम्भव भएको छ । तर ब्रेन पनि आपसमा जोडिएको भए चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ । यी बच्चाहरुको केसमा अझै धेरै अनुसन्धानको खाँचो छ ।’
बनिबुतो गरेर महिनाको १६ सय भारु कमाउने बाबु भुवल कुमारले छोराहरु जन्मेदेखि नै उपचारका लागि सहयोग जुटाउने प्रयास गर्दै आएका थिए ।
उनले भने, ‘मेरा छोराहरु जन्मेपछि मैले उपचारका लागि प्रयास गरेँ । तर, मेरो आर्थिक अवस्थाले गर्दा त्यो सम्भव भएन । अन्त्यमा मैले सबै आशा त्यागिसकेको थिएँ ।’
यी बाबुआमाका अरु दुई छोराहरु छन्, ९ वर्षीय अजित र ६ वर्षीय दाखिया । उनीहरु दुवै स्वस्थ छन् ।
पुष्पाञ्जली भन्छिन्, ‘म हनि र सिंहलाई पनि उनीहरुका दाजुहरु जस्तै खेलेको कुदेको हेर्न चाहन्छु । उनीहरु स्कुल गएको र छुट्टाछुट्टै जीवन बाँचेको हेर्न चाहन्छु ।’
Previous Postयसकारण गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा समर्थन Next Postदार्जिलिङमा फेरि हिंसा भड्कियो, गोली लागेर तीन जनाको मृत्यु